Xidig Ka Dheela EPL Oo 2 Sano Kooxdiisa Uga Maqnaan Doono Si Uu Tababar Ciidan Uu Soo Qaato + Sababta %
Weerar yahanka kooxda kubada cagta Tottenham ee ka dhisan Woqoyga Magaalada London ee wadanka Ingiriisa, ee lagu magacaabo Heung-Min Son, ayaa wuxuu ka maqnaan karaa kooxdiisa sanad ciyaareedyadda kala ah: 2019-20 iyo 2020-21.
Laacibkaan, kaasoo wadanka Koonfurta Kuuriya udhashay, islamarkaana ah 25-sano jir, ayaa wuxuu yahay mid aanan soo qaaban shaqada ciidan ee wadankiisa, halkaasoo sharci ay ka tahay, ka hor inta uusan gaarin qof walba da’da 28-sano jir.
Shaqooyinka uu qaban doono, ayaa waxay isugu jiraan qeybo kala duwan, waxaana ay ku xiran tahay nooca uu doorto qof walba, laakiin howsha uu qaban doono ayaa wuxuu hayn doonaa inta udhaxeysa 21 iyo 36 Bilood, waana muddo aad udheer.
Xidigaan ayaa waxay ubadan tahay inuu aadi doono meesha ay ubadan yihiin ciyaartoyda kubada cagta, halkaasoo ah ka qeyb qaashadda ciyaaraha caalami ah.
Son, oo dhashay Julaayo 8-deeda sanadkii 1992, ayaa wuxuu noqond oonaa 28-sano jir sanadka 2020, marka wuxuu ka maqnaan doonaa kooxdiisa labo fasal ciyaareed, hadii ay uyeeraan qolyaha dalka uqaabilsan ciidanka ama Wasaarada Difaaca.
Tani ayaa la macno ah, in weerar yahankaan uu ka qeyb qaadan doono saddex tartamo oo waa weyn, kuwaasoo kala ah: Koobka aduunka ee Ruusha ka dhici doono, kulamada Aasiya [halkaasoo ay inta badan dalkiisa uu daafacdo 204 ayay ku guueyssteen] iyo Asian Cup.
Labo kamid ah tartamada uu laacibkaan ka qeyb geli karo ayaa la qaban doonaa sanad ciyaraeedkan halka mid kalena uu dhici doono sanadka soo aadan ee 2019, markaasoo gooldhaliyahaan cajiibka ah uu dheeli doono.
Sikastaba, hadii ay tani dhacdo ayaa waxay ku tahay kooxdiisa dhibaato weyn, inkastoo ay heli karaan ciyaaryahano waa weyn, kuwaasoo buuxin kara booskiisa, hadana waxaa marag madoonta inay tabi doonto kooxda kubada cagta Tottenham.
EPLHeung-Min SonPremier LeagueTottenham